स्टेफन हकिङ्गको अन्तिम अनुसन्धान पेपर प्रकाशितः के छ यसमा ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्टेफन हकिङ्गको अन्तिम अनुसन्धान पेपर प्रकाशितः के छ यसमा ?
बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९ मा प्रकाशित !
टेफन हकिङ्ग दिवंगत भइसके तर मृत्युपछि पनि उनले संसारलाई थप एक अनुसन्धान पेपर उपहार दिएका छन् । यो पेपर ‘जर्नल अफ हाई फिजिक्स’मा यो हप्ता प्रकाशित भएको छ ।
हकिङ्गका अन्य कृति जस्तै यो आलेखले पनि ब्रम्हाण्ड बारे अनुत्तरित रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोजेको छ । यो पेपर मुख्यत ब्रम्हाण्ड एउटा मात्रै छ कि धेरै वटा छन् ? ब्रम्हाण्डको उत्पतीको कारण मानिएको ‘बिग ब्याङ्ग’ले नै असिमित सङ्ख्यामा ब्रम्हाण्ड श्रृजना गरेको थियो कि ? असिमित वटा ब्रम्हाण्ड छन् भने ति सबैमा एउटै भौतिकशास्त्रिय नियम लागु हुन्छ कि सबैमा अलग अलग हुन्छ ? यदी ब्रम्हाण्ड असिमित नभएर धेरैवटा मात्र छ भने तिनमा साझा हुने केही नियम हुन्छन ? जस्ता प्रश्नहरु छन् ।
यदी यी प्रश्नहरुले तपाईको दिमाग घुमायो भने विस्तारमा बुझ्नको लागि तपाई आफैले उक्त अनुसन्धानात्मक पेपर पढ्नुपर्छ । हकिङ्गको यो पेपर लेखनमा बेल्जियमको लेउभन विश्वविद्यालयको इन्स्टीच्युट फर थिओरेटिकल फिजिक्सका थोमस हरटोगले सगँसगै काम गरेका थिए ।
यसको मुख्य चुरो कुरा यस्तो छः मानौं ब्रम्हाण्ड ‘बिग ब्याङ्ग’बाट निर्माण भएर असिमित रुपमा फैलिन थाल्यो । कहिले अन्त्य नहुने भनिएको यो फैलावटबाट हकिङ्ग र हरजोगको विचारमा सङ्ख्यामा ब्रम्हाण्ड बने । तर यदी ब्रम्हाण्ड असिमित छन् भने समस्या आउछ हाम्रो ब्रम्हाण्डको स्थान के हो र यी सम्पूर्ण ब्रम्हाण्डमा लागु हुने नियम कस्तो हुन्छ ,समान वा फरक ?
यो पेपरमा हकिङ्ग र हरजोगले ‘बिग व्याङ्ग’को सैदान्तिक गुणलाई गणितको माध्यमले पुनरजाँच गरेका थिए । ब्रम्हाण्डको यो नयाँ मोडलमा उनीहरुले सम्पूर्ण ब्रम्हाण्डमा सबै नियम समान नभए पनि केही आधारभूत नियमहरु भने समान हुन्छन् भन्ने धारणा राखेका छन् । यसले भविष्यका वैज्ञानिकहरु र भौतिकशास्त्रीहरुलाई अन्य ब्रम्हाण्डको पहिचान गर्नको लागि बढी व्यवस्थीत जानकारीहरुहरु दिएको छ ।
यो पेपरको अन्तिम स्वरुप हकिङ्गको मृत्यु हुनुभन्दा दश दिन अघि बुझाइएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: जाजरकोटका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा
NEXT POST Next post: सैनिक युनिफर्म बेच्न खोज्दा अक्षयकुमार यसरी फसे
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १३:२९